Shiinaha ZAZE Petro-kiimikada Nidaamka Soo saar-1 warshad iyo soo saarayaasha | Convista
Anaga, iyadoo la raacayo naqshadeynta iyo soosaarida heerka API61011th Centrifugal Pump for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Sectors, waxaan soo saareynaa bambooyin geedi-socodka kiimikada kiimikada ah ee taxanaha ZA / ZE.
Mashiinka ugu weyn ee bamka, sida ku cad qaabka taageerada, wuxuu u qaybsan yahay laba qaab: OH1 iyo OH2, mishiinka kiciyana waa dhismeyaal furan oo xiran.
Kuwaas oo ka mid ah, ZA waxaa iska leh OH1, dabeylaha xiran; iyo ZAO waxay ka kooban tahay OH1, mid furan;
ZE wuxuu ka socdaa OH2, midna wuu xiran yahay, ZE0na wuxuu ka socdaa OH2, oo furan.
Bamka ZE, marka loo eego heerka cadaadiska, sidoo kale waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood: D, Z iyo G (D guud ahaan looma calaamadeynin) xaaladaha hawlgalka.
Waxay u aragtaa codsiyo ballaaran oo ku saabsan xaaladaha gaadiidka ee cadaadiska sare ama dhexdhexaadka ah ee nadiifka ah ama wasakhda leh, wax daaqaya iyo xirashada walxaha loogu talagalay warshadaha sida saliidda saliidda, warshadaha kiimikada dhuxusha, warshadaha kiimikada, injineernimada kiimikada cusbada, ilaalinta deegaanka, saxarka waraaqda iyo sameynta warqadda, macaaneynta biyaha badda, daaweynta biyaha, iyo metallurgy, gaar ahaan gaadiidka aadka loogu baahan yahay ee cadaadiska sare, sunta, dabka, waxyaabaha qarxa, iyo walxaha wax gubaya ee xoogan sida qeybaha olefin, ionic membrane caustic soda, salt salt, Bacriminta, aaladda osmosis , Kala-miiridda biyaha badda, MVR iyo ilaalinta deegaanka, iwm, oo muujinaya awood muuqata.
Qulqulka: Q = 5 ～ 2500m3 / h Madaxa: H ≤ 300m
-30 ≤T≤150 ℃
Tusaale ： ZEO 100-400
ZEO -------- Koodhka taxanaha ee ZE Pump
O Qalab-fur furan
100 -------- Dhexdhexaadiyaha ka baxa: 100 mm
400 -------- dhexroor Magac leh oo ah impeller: 400 mm
1. Qallafsanaanta iyo xoogga ayaa si fiican loo hagaajiyay iyada oo la hagaajinayo naqshadeynta usheeda dhexe. Tani waxay si muuqata kor ugu qaadeysaa isku halleynta bamka, iyada oo aan ballanqaadin sidoo kale adeeg cimri dheer iyo hoos u dhigista qiimaha hawlgalka.
2. Jirka dhalidda waxaa loogu talagalay laba qaab oo lagu qaboojiyo iyadoo lagu qaboojinayo dabiiciga iyo biyaha. Hadday dhexdhexaad tahay in ka badan 105 ℃, waxay ku talineysaa in lagu qalabeeyo nidaamka qaboojinta biyaha, taas oo hoos u dhigeysa heerkulka dhalista adoo qaboojinaya saliida saliidda ee jawiga hawlgalka ka wanaagsan;
3. Daboolka bamka waxaa lagu qalabeeyaa A qaboojiyaha, kaas oo hoos u dhigaya heerkulka mashiinka dahaadhka mashiinka isagoo qaboojinaya godka cimri dhererkiisa.
4. Lowska kiciya mashiinka mashiinka ayaa lagu xirayaa soo bandhigida dhaqe is-qufulka iskiis u xirtay ee Jarmalka. Waad ku mahadsan tahay dhaqe, lowsku waa ka xor dabacsan yahay haddii ay dhacdo bamka gadaal ama gariirka. Taasi waxay ka dhigan tahay in mashiinku u baahan yahay hawlgal yar oo dalbanaya iyo shuruudo rakibid ah.
5. Bambooyinkan taxan ee qulqulka badan waxay ka kooban yihiin meydad laba aqal leh, kuwaas oo loogu talagalay inay si wanaagsan isugu dheellitiraan xoogga shucaaca ee ka dhasha duruufaha hawlgalka aan qaabaysnayn. Intaa waxaa sii dheer, waxay raadineysaa xoog isku dheelitiran oo dheellitiran iyadoo la adeegsanayo siddooyin dhejis ah iyo godad dheellitiran.
6. Noocyada noocan oo kale ah ee mashiinka wax lagu xidho sida isku-dhafan, hal-terminaal ama laba-terminaal, oo ay weheliso hababka isku xidhka kaabayaasha isku xidhka ah ayaa loo isticmaali karaa iyadoo la raacayo dhexdhexaad si loo raro, si looga dhigo shaabadaynta iyo qaboojinta mid lagu kalsoonaan karo. Shaabadaynta iyo maydhashada waa in loo sameeyaa si waafaqsan API682. Daabacidda mashiinka mashiinka ayaa laga beddeli karaa iyadoo loo eegayo baahida gaarka ah ee isticmaaleyaasha.
7. usheeda dhexe waxaa la siiyaa tilaabooyin kalabaxan, kuwaas oo meesha ka saaraya hoos u dhaca ku yimaada la macaamilida qalabka wax soosaarayaasha, si loo helo hufnaan shaqo oo sareysa rakibaadda iyo kala daadinta.
8. Isku xidhka diaphragm-ka ee la dheereeyey, mashiinku uma baahna kala furfurka tuubooyinka iyo wareegga dayactirka iyo dayactirka mashiinka oo dhan.
Hore: ZAO saarida walxaha adag
Xiga: Mashiinka Zirconium
Guga nooca yar ee wiishka lagu rakibo ee leh kabaalka badbaadada ...
Xilliga guga oo lagu rakibo nooca ceelka buuxa oo leh amniga kabaalka ...